မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအသင်း တည်ထောင်ခြင်း(၁၆)နှစ်ပြည့် ဂီတရန်ပုံငွေပွဲပြုလုပ်မယ်
13 Feb 2018 . 3:25 PM
တတိယအကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအသင်းတည်ထောင်ခြင်း (၁၆)နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ရန်ပုံငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့မကျောင်းလမ်းရှိ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲမှာ အဆိုတော်များဖြစ်ကြတဲ့ စိန်ဝင်းထွန်း၊ ဂျက်မြသောင်း၊ ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ စောဖိုးခွါး၊ ဝေဠုကျော်၊ ချိုပြုံး၊ တက္ကသိုလ်လဲ့လဲ့၊ မေဆွိ၊ မီမီဝင်းဖေ၊ မေခလာ၊ ချစ်သုဝေ၊ မိုင်၊ ရတနာမိုင်၊ ပွင့်၊ အိအိချွန်၊ စိုးစန္ဒာထွန်း၊ ရွှေရည်သိန်းတန်၊ သီရိသိန်းတန်၊ သဲနုဝါနဲ့ အခြားအဆိုတော်များစွာက ပါဝင်ကူညီသီဆိုပေးသွားကြမှာဖြစ်ပြီး၊ ရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲမှရရှိလာမယ့် အကျိုးအမြတ်များကို မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအဖွဲ့ပါင်း ၃၂ ဖွဲ့ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ပညာရေးကဏ္ဍ၊ ကျန်းမာရေး၊ အထောက်အကူပြုကိရိယာပစ္စည်းများကို လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တတိယအကြိမ်မြောက် ရန်ပုံငွေပွဲကျင်းပရတဲ့အပေါ်ကို မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအသင်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးအေးကိုကိုက ”ကျွန်တော်တို့ အခုပွဲလေးကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာ ဒီအကြိမ်နဲ့ဆို သုံးကြိမ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုပွဲလေးလုပ်ရတာ အသင်းမှာ ရန်ပုံငွေလိုအပ်နေလို့ပါ။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ အသင်းမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကများတယ်။ ထောက်ပံ့ကူညီပေးရမယ့်အရာတွေလည်း အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရန်ပုံငွေပွဲတွေကို ကျင်းပရတာဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲရဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းများမှာ ၂ဝဝဝဝ၊ ၁ဝဝဝဝ၊ ၅ဝဝဝ ကျပ်ဖြစ်ကာ ဝယ်ယူအားပေးလိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ မန်းသီရိတေးသံသွင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူများအသင်းမှာ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံကိုယျအင်ျဂါမသနျစှမျးသူမြားအသငျး တညျထောငျခွငျး(၁၆)နှဈပွညျ့ ဂီတရနျပုံငှပှေဲပွုလုပျမယျ
တတိယအကွိမျမွောကျပွုလုပျမယျ့ မွနျမာနိုငျငံကိုယျအင်ျဂါမသနျစှမျးသူမြားအသငျးတညျထောငျခွငျး (၁၆)နှဈပွညျ့အထိမျးအမှတျအနနေဲ့ ရနျပုံငှဂေီတဖြျောဖွပှေဲကို ဖဖေျောဝါရီ ၁၇ ရကျနတှေ့ငျ ရနျကုနျမွို့၊ မွို့မကြောငျးလမျးရှိ အမြိုးသားကဇာတျရုံမှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီရနျပုံငှဖြေျောဖွပှေဲမှာ အဆိုတျောမြားဖွဈကွတဲ့ စိနျဝငျးထှနျး၊ ဂကျြမွသောငျး၊ ဇျောဝငျးထှဋျ၊ စောဖိုးခှါး၊ ဝဠေုကြျော၊ ခြိုပွုံး၊ တက်ကသိုလျလဲ့လဲ့၊ မဆှေိ၊ မီမီဝငျးဖေ၊ မခေလာ၊ ခဈြသုဝေ၊ မိုငျ၊ ရတနာမိုငျ၊ ပှငျ့၊ အိအိခြှနျ၊ စိုးစန်ဒာထှနျး၊ ရှရေညျသိနျးတနျ၊ သီရိသိနျးတနျ၊ သဲနုဝါနဲ့ အခွားအဆိုတျောမြားစှာက ပါဝငျကူညီသီဆိုပေးသှားကွမှာဖွဈပွီး၊ ရနျပုံငှဖြေျောဖွပှေဲမှရရှိလာမယျ့ အကြိုးအမွတျမြားကို မွနျမာနိုငျငံကိုယျအင်ျဂါမသနျစှမျးသူမြားအဖှဲ့ပါငျး ၃၂ ဖှဲ့ရဲ့ လိုအပျတဲ့ပညာရေးကဏ်ဍ၊ ကနျြးမာရေး၊ အထောကျအကူပွုကိရိယာပစ်စညျးမြားကို လှူဒါနျးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
တတိယအကွိမျမွောကျ ရနျပုံငှပှေဲကငျြးပရတဲ့အပျေါကို မွနျမာနိုငျငံကိုယျအင်ျဂါမသနျစှမျးသူမြားအသငျးအထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးအေးကိုကိုက ”ကြှနျတျောတို့ အခုပှဲလေးကိုလုပျဖွဈခဲ့တာ ဒီအကွိမျနဲ့ဆို သုံးကွိမျရှိပါပွီ။ ကြှနျတျောတို့ ဒီလိုပှဲလေးလုပျရတာ အသငျးမှာ ရနျပုံငှလေိုအပျနလေို့ပါ။ အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျးပါပဲ အသငျးမှာလိုအပျတဲ့အရာတှကေမြားတယျ။ ထောကျပံ့ကူညီပေးရမယျ့အရာတှလေညျး အမြားကွီးရှိနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီရနျပုံငှပှေဲတှကေို ကငျြးပရတာဖွဈပါတယျ” လို့ ဆိုပါတယျ။
ဒီရနျပုံငှဖြေျောဖွပှေဲရဲ့လကျမှတျဈေးနှုနျးမြားမှာ ၂ဝဝဝဝ၊ ၁ဝဝဝဝ၊ ၅ဝဝဝ ကပျြဖွဈကာ ဝယျယူအားပေးလိုတဲ့သူတှအေနနေဲ့ မနျးသီရိတေးသံသှငျး၊ မွနျမာနိုငျငံကိုယျအင်ျဂါမသနျစှမျးသူမြားအသငျးမှာ ဝယျယူအားပေးနိုငျပါတယျ။
by Naw Hsel Hte .3months ago
by Naw Hsel Hte .5months ago
by Editor .6months ago
Google နဲ့ လက်တွဲသွားမယ့်အပြင် US Ban အပေါ် Huawei သိစေချင်တဲ့အချက်များ
64MP Camera ပထမဆုံးသုံးလာတဲ့ဖုန်းဖြစ်လာမယ့် Samsung Galaxy A70S
Windows 10 May Update မှာပါဝင်လာမယ့် အလန်းဆုံး Features ၁၀ မျိုး